CNC Machines Factory - China CNC Machines Manufacturers, Suppliers
Masinina sokitra sy milina fangaro vita amin'ny hazo
1.Masinina sokitra sy milina fangaro vita amin'ny hazo
2. Single axis double antsy, ny hafainganam-pandehan'ny fanodinana dia haingana, ary ny fitaovana famahanana mandeha ho azy dia ampiana amin'ny lathe, izay mampitombo be ny fiarovana manokana ny mpandraharaha.
3. Ny milina fanoratana sy ny lathe dia nampidirina mba hanatsarana ny fahombiazan'ny asa
Five Axis Laser Cutting Machine ho an'ny fitaovana fandidiana
1. Famatsiana herinaratra: dingana tokana 220VAC 20A (mpanapaka faritra lehibe);tady herinaratra 10m×1
2. Rivotra voapotsitra
Fanerena rivotra: 0.8Mpa;
Sodina savaivony: 6mm fanerena avo entona sodina;
Ny hafa: Ny entona dia tokony ho tsy misy menaka sy maina;
3. Ny fahafahana mitondra ny tany dia 800Kg/㎡;
4. Ambient mari-pana (℃) 25±5;
5. Hamandoana manodidina (RH) 30%～70%RH (tsy misy condensation);
Fibre tamin'ny laser fanapahana milina-compact, flatbed, fitambarana sy fantsona fanapahana rafitra
Fibre Laser Cutting Machines – Compact, Flatbed, Combination ary Rafitra fanapahana Tube.
Ny kalitao avo lenta, ny vidin'ny metaly indostrialy manapaka Fibre Lasers, miaraka amin'ny fahalalana laser indostrialy midadasika sy ny rafi-pamokarana mora vidy, APEX no mpiara-miasa amin'ny milina tonga lafatra amin'ny filanao rehetra.Ny tsirairay amin'ireo modely amin'ny laser fibre dia mety amin'ny karazana fampiharana sy vokatra indostrialy.
Ny Fibre Lasers dia takatry ny vidiny ary tena mifaninana, napetraky ny ekipanay manerana ny firenena sy injeniera efa za-draharaha.Nametraka milina laser fibre fibre metaly maro izahay ho any amin'ny faritra midadasika toy ny injeniera ankapobeny, ny famokarana vokatra, ny oniversite, ny aerospace, ny fiara, ny mpanamboatra fanomezana manokana, ny mpanamboatra, ny mpanamboatra famantarana sy ny maro hafa.Ny fanapahana metaly mazava tsara dia tsy mora na mora mora.
Ny Fibre Lasers rehetra dia tonga feno miaraka amin'ireo rafitra mifototra amin'ny Windows PC manome anao fifehezana feno amin'ny fampandehanana ny milinanao, ankoatry ny Windows dia mahazo mpanara-maso an-tariby tsy misy tariby ianao mba hampandehanana ny fiasan'ny laser fibre anao.Na inona na inona karazana Fibre Laser tadiavinao dia manana safidy mifanaraka amin'ny orinasanao izahay.
APEX1390 fibre laser fanapahana milina
1.1000 Watts fibre laser metaly fanapahana milina mampiasa Raycus 1000 Watts tamin'ny laser fitaovana (safidy: IPG) amin'ny marin-toerana fampisehoana, ny ampahany manan-danja dia mety hahatratra 100,000 ora;
2. Advanced CNC rafitra fanaraha-maso, dia afaka mamaky .ai, .plt, .dxf, .lxd sy ug code mivantana, mora ny miasa;
3. Loha manapaka manan-tsaina afaka manitsy ny haavony mandeha ho azy mba hitazonana ny halavan'ny focal tsy tapaka sy ny kalitaon'ny fanapahana maharitra;
4. Nafarana fitaovana fifindran'ny mazava tsara avo izay miasa tsara amin'ny rafitra servo, noho izany dia azo antoka ny fanapahana mazava tsara sy ny fahombiazana.
China CNC Manufacture fibre laser fanapahana milina ho an'ny metaly
(1).Chassis mavesatra henjana avo, mampihena ny hovitrovitra ateraky ny fizotry ny fanapahana haingana.
(2).Gantry double-drive firafitry, miaraka amin'ny nafarana Alemaina rack & gear transmission system, izay manatsara ny famokarana fahombiazana.
(3).Lalin'ny mpitari-dalana alumina avo lenta, aorian'ny aalysis tsy manam-petra, izay manafaingana ny hafainganam-pandehan'ny arc cicular.
(4).High precision, haingana haingana, tery slit, hafanana ambany indrindra faritra voakasika, malama notapatapahina sy tsy misy burr.
(5).Ny lohan'ny fanapahana tamin'ny laser dia tsy mifandray amin'ny tontolon'ny fitaovana ary tsy manongotra ny workpiece.
(6).Ny slit no tery indrindra, ny faritra voakasika amin'ny hafanana no kely indrindra, ny deformation eo an-toerana ny workpiece dia tena kely, ary tsy misy ny mekanika deformation.
(7).Manana fahaiza-manao fanodinana tsara izy io, afaka manodina ny lamina rehetra, ary afaka manapaka fantsona sy profil hafa.
(8).Ny fanapahana tsy mety levona dia azo atao amin'ny fitaovana amin'ny hamafin'ny rehetra toy ny takelaka vy, vy tsy misy pentina, takelaka firaka aluminium, ary firaka mafy.
APEX1390 milina fanapahana laser fibre kely ho an'ny takelaka Stainless
(1) High precision, avo hafainganam-pandeha, tery slit, hafanana ambany indrindra faritra voakasika, malama fanapahana ambonin'ny tsy misy burr.
(2)Tsy mifandray,Ny lohan'ny fanapahana tamin'ny laser dia tsy hifandray amin'ny ety ambonin'ny fitaovana ary hanongotra ny workpiece.
(3)Ny tselatra no tery indrindra,ny faritra voakasika hafanana no kely indrindra, ny deformation eo an-toerana ny workpiece dia tena kely, ary tsy misy mekanika deformation.
(4)Fanodinana malefaka, afaka manodina sary tsy misy dikany, afaka manapaka sodina sy mombamomba hafa koa.
(5)Mety amin'ny fitaovana isan-karazany,Afaka manapaka lovia vy, Stainless vy, aluminium firaka lovia, simenitra carbide sy ny fitaovana hafa amin'ny hamafin'ny tsy misy deformation
4000W High Precision Metal Fibre Laser Cutting Machine ho an'ny Stainless Aluminum Steel Sheet
Endri-javatra amin'ny milina fanapahana tamin'ny laser fibre #Advance rafitra rafitra mitondra fiara roa, hery mitondra fiara roa avy amin'ny fomba fiasa tsara indrindra.3Top mahazatra fitaovana, rack sy tari-dalana lalamby, tsy mila fikojakojana, hafainganam-pandeha avo sy ny fahombiazana.# Ny singa avy amin'ny mpamatsy malaza eran-tany, Panasonic, Yaskawa, YYC, Simens, Precite, sns.#Fomba fiasana amin'ny tontolo iainana, asio taratra manimba.Ataovy azo antoka ny toe-javatra iasana maitso sy azo antoka kokoa.Assurance kalitao, garantie lava.drafitra fiantohana isan-karazany hofidinao.#Profesy...
China CNC Manufacture 1390 1000w fibre laser fanapahana milina ho an'ny metaly
Fibre Laser Cutting Machine tena endri-javatra:
(5).Ny lohan'ny fanapahana tamin'ny laser dia tsy mifandray amin'ny endrik'ilay fitaovana ary tsy manongotra ny workpiece.
123456Manaraka >>> Pejy 1 / 21